အရောင်ရင့် မှတ်တမ်း (Dec 2012) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့် မှတ်တမ်း (Dec 2012)
Posted by kai on Dec 5, 2012 in Myanmar Gazette, News, Opinion - Op-ed | 52 comments
BURMA RELATED NEWS – December 01-03, 2012.
Reuters – Myanmar govt asks Suu Kyi to investigate mine dispute
Reuters – Calls grow for probe into police violence at Myanmar mine
Reuters – Blind China dissident urges Xi follow Myanmar path to reform
AP – Analysis: Myanmar’s Suu Kyi shows pragmatism
IANS – Vietnam mobile company forays into Myanmar
The Nation – Seeking opportunity in Myanmar
The Nation – High level Myanmar ministers to meet Singapore Cabinet
The Nation – UNODC Executive Director meets Aung San Suu Kyi
Bangkok Post – Myanmar’s investment law: temper applause with caution
Bangkok Post – BoI could sweeten Dawei with privileges
BruDirect.com – Myanmar President Arriving Today On 3-Day State Visit
The Manila Times – Myanmar cooperatives optimistic on growth
Bernama – Myanmar To Gain Expertise, Experience During Ministerial Delegation Visit To Singapore
Bernama – Aussie Church To Build Two Houses For Poor Children In Mandalay
Channel NewsAsia – Myanmar police ‘apologise’ for violent raid on mine rally
Adelaide Now – Port Life church raises $114k for Myanmar children
The Irish Independent – Burma: The land of new beginnings
The Independent – Lives still in limbo for Burma’s forgotten cyclone victims
Jakarta Globe- Asean: Myanmar Needs Urgent Humanitarian Aid
The Irrawaddy – Monks Suffer with Dignity but Shall Not Forgive
The Irrawaddy – Hundreds Rally to End Domestic Violence
The Irrawaddy – 88 Gen Leaders Refuse Copper Mine Probe Post
Mizzima News – Saffron Revolution’s leading monk rearrested
Mizzima News – President announces 30-member Monywa investigation committee
Mizzima News – China remains committed to Monywa project
DVB News – Ministry encourages citizens to ‘complain’ about bribery
DVB News – Two activists arrested at mine rally in Rangoon
BURMA RELATED NEWS – December 04-05, 2012.
AP – Myanmar mine protesters denied bail
AP – Myanmar graffiti artists unhappy with new ban
AFP – Ex-leader of Myanmar monk rallies arrested
Reuters – Mining hopefuls face long haul in Myanmar despite new laws
Reuters AlertNet – Myanmar still near bottom of corruption rankings in 2012 despite reforms
Aljazeera – Progress stops at the Myanmar elite’s door
The Edge Malaysia – Myanmar —anation rises
The Borneo Post – Brunei in talks with Myanmar on concessions
Bangkok Post – Myanmar cement firms prepare for building boom
Bangkok Post – TSL plans Myanmar foray
PR Newswire – Frost & Sullivan: Future is Bright for Myanmar
The Nation – Experts urge changes to Myanmar telecom bill
UN News Centre – Top UN relief official calls on Myanmar’s leaders to support humanitarian efforts
UNHCR – Struggling to make sense of communal unrest in western Myanmar
Channel News Asia – S’pore, Myanmar affirm warm relations
CRIENGLISH.com – Japanese Conglomerate Eyes Myanmar Investment
Global Times – Myanmar’s state-owned newspapers start publication in color
The Chosun Ilbo – Celebrity Couple Support School in Burma
Imphal Free Press – Indo Myanmar committee meeting held
The Irrawaddy – Six Mine Protesters Charged With Incitement
The Irrawaddy – Rangoon ‘Worst Quality of Life’ in Southeast Asia
The Irrawaddy – Coal, Rivers, Gas and Hot Rocks
Mizzima News – Japanese corporation looks to invest big in Burma
Mizzima News – Monywa crackdown due toalack of rule of law, says local MP
Mizzima News – Suu Kyi chairs first Monywa Inquiry meeting
DVB News – Authorities lock up protestors for filming demonstration
DVB News – Burma slams gold miners for protesting without permit
DVB News – Convoy shooting spree leaves 1 dead,3injured in Kachin state
BURMA RELATED NEWS – December 06-10, 2012.
Reuters – Myanmar government apologizes to monks over mine protest injuries
AP – UN official calls for help for Myanmar’s displaced
The Nation – Thai investors eye 16 Myanmar industries
The Nation – Info sought on missing property of Thais detained in Myanmar
Bangkok Post – Dawei deal signing delayed
Global Times – Myanmar human rights commission vows to enhance public awareness
E-Pao.net – India building roads, bridges in Myanmar
TechEye – Intel moves into Burma
The Irrawaddy – FEATURE: A Brief Encounter with Former Spy Chief Khin Nyunt
The Irrawaddy – Suu Kyi Addresses Thousands at Her Ancestral Home
Mizzima News – Suvarnabhumi—“Gateway to Burma”—offers ASEAN lanes
Mizzima News – Aung Min extols govt reforms on Human Rights Day
Mizzima News – Citizens of 22 more countries to get visas on arrival
DVB News – Chin rebels strike deal with gov’t during peace talks
DVB News – State mouthpiece preemptively blasts Al Jazeera documentary
BURMA RELATED NEWS – December 11-12, 2012.
Reuters – Myanmar monks protest over mine violence, security tight
Reuters – MUFG to pay $8.6 million in U.S. sanctions case
AP – Myanmar monks protest to demand crackdown apology
AFP – Exile media crafting new role from inside Myanmar
Asian Tribune – Burma remains the major source of drugs in the region, UNODC says
Forbes – Visa Touts Plastic, Mobile Payments In Cash-Only Myanmar
IANS – Salman Khurshid to visit Myanmar in first bilateral trip
IANS – Apollo launches telemedicine service in Myanmar
IANS – No fencing along India-Myanmar border
IANS – 17,324 kg of drugs seized on Indian borders
UPI – ICRC to visit Myanmar’s prisoners
The Malaysian Insider – ICRC ready to resume detention visits to Myanmar – International Committee of the Red Cross
Business Wire – GE Aeroderivative Gas Turbines Tapped for Independent Power Project in Myanmar
Fox News – Myanmar court grants bail to Yangon demonstrators against copper mine
The Nation – PM, ministers to visit Myanmar on Monday
Bangkok Post – Probe into Myanmar use of Swedish weapons
Bangkok Post – 20 Thai companies to explore Myanmar
Global Times – Myanmar, Thai businessmen to hold business matching in Yangon
Ballarat Courier – ?Singapore turns away rescued boat people
The Next Web – Japan’s KDDI to open an office in Myanmar, marking its 100th site overseas
The Irrawaddy – Govt Uses Swedish Weapons Against KIA
The Irrawaddy – Thousands Join Peaceful Nationwide Monks Protest
The Irrawaddy – Websites Sell Burmese Brides to Chinese Bachelors
Mizzima News – Swedes launch inquiry into weapons allegations
Mizzima News – HSBC facilitated prohibited transactions with Burmese junta, says US govt
Mizzima News – Western Union agrees transfers through Burma’s CB Bank
DVB News – Filmmaker slams party chief’s accusations of fabrications
DVB News – Indian officials accused of providing Burma with embargoed weapons
BURMA RELATED NEWS – December 13-17, 2012.
AP – Half century of neglect leaves Myanmar’s health system broken; reforms bring glimmer of hope
AP – Jason Mraz headlines groundbreaking concert in Myanmar against human trafficking
AP – Myanmar gov’t apologizes for crackdown violence
The Edge Malaysia – Myanmar courts wary investors on port project
UPI – India wants Myanmar defense cooperation
Asia News Network – Thailand, Myanmar seek Japan for sea port project
IANS – India, Myanmar discuss military ties
IANS – Myanmar president calls for cessation of armed conflicts
Bernama – Yingluck Visits Dawei In Myanmar
Channel NewsAsia – Myanmar hosts first international concert in decades
The Japan Times – Meidensha ties with Myanmar firm
PRNewswire – Aung San Suu Kyi to be Honored with 2012 Ion Ratiu Democracy Award
Relief Web – UNFPA and Ministry of Immigration and Population Launch 2014 Population and Housing Census Project
Digital Spy – BBC to air ‘Doctor Who’, ‘Graham Norton Show’, ‘Teletubbies’ in Burma
EurekAlert! – Univ. of MD School of Medicine to study drug-resistant malaria in Myanmar
The Irrawaddy – Thein Sein Travels to Dawei for Talks with Thai PM
The Irrawaddy – Burma Army Reportedly Suffers Mass Casualties in Kachin State
The Irrawaddy – Why Chinese Authorities Aren’t Worried About Burma
Mizzima News – Indian bank opens representative office in Burma
Mizzima News – Rangoon prepares to take the high road
Mizzima News – About 20 children trafficked per month across Thai-Burmese border
DVB News – Activists call for ‘unconditional release’ of copper mine protesters
DVB News – Burmese officials make new mine protest arrests
DVB News – No progress without engagement on Burma’s nuclear front
(ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် – ဒီလှိုင်းဂျာနယ်။ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၄၆) မှ)
ဂျုံးဂျုံးဂျက်ဂျက်အဘ တော့ ပြုတ်စော်နံနေဘီ…
ဂီဂီ ရဲ့ မပြုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ် ။
သူက ဦးသိန်းစိန် အားကိုးရတဲ့ လက်စွဲ လို့ကြားတယ် ။
အမာဂိုဏ်း မဟုတ်ဘူး ။ အပျော့ဂိုဏ်းကတဲ့ ။
ထောက်ခံမဲ တစ်စောင်ပါ ထည့်ထားခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ပို့စ် နဲ့ တော့ မဆိုင်ပါဘူး
အခုနကမှ တင်တဲ့ မနန်းတော်ရာသူပို့စ်မှာ ကွန်းမန့် ပိတ်နေလို့ လာပြောတာပါ
အခု ရသွားပြီမို့ ပြန်လာပြောတာ
MEXICO CITY — The antivirus software pioneer John McAfee was arrested in Guatemala City on Wednesday after he slipped over the border …
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ.. လွတ်လပ်စွာသုံးနိုင်တဲ့နေ့တနေ့ကို… ရောက်လာနိုင်ကြောင်း..
updated 5:56 PM EST, Thu December 6, 2012
Branson says if one of his companies is failing, he doesn’t continue with failed strategies
မူးယစ်ဆေးဝါး လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲးနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ ရောက်လာရင်
ဈေးနှုန်းလဲ ချိုသာလာမှာပေါ့ ကျုပ်ကတော့ သဘောကျတယ်ဗျို့
မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာလဲ သုံးတတ်ရင် မိတ်ဆွေပါပဲ။
လွန်ကဲ လာလို့ဂဒေါ့ ထမင်းစားတာတောင် အသကုန်စားကြည့်ပါလား။
အခမဲ့ဇြစ်တဲ့.. Google Apps ရပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပါ..။
ဒါပေမယ့်.. အောက်ကလင့်ခ်မှာ.. အီးမေးလ်တခုတော့လုပ်လို့ရနိုင်သေးတဲ့အကြောင်း.. ရေးထားပါတယ်..
သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် သတင်းများ ထုတ်ပြန်ရာတွင် နှစ် ဖက်စလုံးကို မျှမျှတတရေးသားထုတ် ပြန်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တစ်ပတ်အတွင်း နှစ်ကြိမ်မြောက် ပြောကြားခြင်းအဖြစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံးတွင် သတင်းထောက် များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
”သတင်းထောက်တွေကို လည်း မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခြားကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်း ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာ မျှမျှတတ လုပ် ပေးစေချင်ပါတယ်။ သေသေချာချာ စိစစ်ပါ၊ သေသေချာချာ စုံစမ်းပါ၊ အခြေခံ၊ နောက်ခံအကြောင်းတွေကို လည်း သေသေချာချာ လေ့လာပါ။ မျှမျှတတနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်အကျိုး ကို ကြည့်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် သုံး သပ်တင်ပြစေချင်ပါတယ်”ဟု ကြေးနီ စီမံကိန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းသပိတ်စခန်းများကို အင် အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ကလည်း မုံရွာမြို့ရှိ ဝင်းယူနီယံဟိုတယ်၌ သ တင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် နှစ်ဖက် စလုံးကို မျှမျှတတ ဖော်ပြပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၁၅)ရက်မြောက်နေ့ တွင် လွှတ်တော်တွင်း၌ လက်ပံ တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ် ခင်စန်းလှိုင်၏အဆိုကို ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်က ပြန် လည်ဆွေးနွေးစဉ်က လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီးစီမံကိန်းနှင့် ပတ် သက်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကြီး ထွားလာရခြင်းမှာ မီဒီယာများ၏ ပယောဂ မကင်းကြောင်းထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
”ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ အင်မတန် ခက်ခဲတဲ့ လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေ တယ်ဆိုတာ ခဏခဏ ပြောပါတယ်။ အဲဒီ ခက်ခဲတဲ့လမ်းကို လျှောက်တဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ် တဲ့ သတင်းထောက်တွေလည်း ပါပါ တယ်။ ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့ ခက်ခက် ခဲခဲလမ်းကို တတ်နိုင်သလောက် ချောမွေ့အောင် ကူညီခင်းပေးကြပါ လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်”ဟု ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
Messenger News Journal မှ…
သတင်းမီဒီယာသမားတွေကလည်း ဒေါ်စုစကားကို အလေးထားပုံပေါ်တယ်။
သတိထားမိသလောက် သတင်း ဖွ တာတွေ နည်းလာသလားလို့။ :hee:
By Karen Sloan Contact All Articles
“လက်ပဒေါင်း” လက်ပဒေါင်း လွတ်လွတ်ကြီး ဆွဲလာပါတယ်ခင်ဗျ
ရှေ့မှာ “စုံ၊ စစ် ကော်မရှင်” က ဖျတ်ကနဲ တားပါတယ်ခင်ဗျ
ဟော .. လက်ပဒေါင်း က နောက်ကတက်လာတဲ့ “သပိတ်စုံ” နဲ့ ၀မ်း-တူး ရိုက်ပြီး ဆက်သယ်ပါတယ်
“Second God” နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျ
အဲ အဲ .. Second God ကို သပိတ်စုံက အရှိုန်နဲ့ လှန့်တယ်ဗျ
ဒါပေမယ့် Second God လေ မရဘူးဗျ၊ လုပြီး “သမတရုံး ၀န်” ခြေထဲ ထဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်
သမတရုံး ၀န် ကလည်း ခြေယောင်လေး ပြကာ ပြကာနဲ့ အမကြီးချင်းထပ်နေအောင် ပြောရင်း သယ်ပါတယ်
ခွေးမသား “အယ်လ်ဂျားဇီးယား” က ဘင်ဂလီကွက်နဲ့ ဒိုင်ဗင်ဝင်ထိုးပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ “ဖော်ကာ” က လဲဗျီးအကွက်နဲ့ ရှေ့တက် ဖမ်းလိုက်တဲ့အတွက်
ခုဆိုရင် ဖော်ကာ ပိုက်ဘောမိသွားပါပြီ
ဒါနဲ့ပဲ ယနေ့မနက်အဖို့ တောင်ကန်မြောက်ကန် FaceBook ဘောပွဲကြီးက “ဖော်ကာ ~ ရပ်ပ်ပါ” တိုက်ပွဲဖက်ကို အာရုံရောက်သွားပါကြောင်း … ဟောင်းးး ဟောင်းးး
မောင့်ကျက်သရေ ဂစ် တဲ့နော်
Request လုပ်ချင်ပါတယ် သူကြီးရေ။
ဒီ အရောင်ရင့် မှတ်တမ်း ကို စတစ် လုပ်ပေးထားစေလိုပါတယ်။
သတင်းလေးတွေ ပြောချင်ရင် ပြန်ရှာနေရတာကြောင့် တော်ရုံဆို မမျှ ဖြစ်ဘူး။
အခုသတင်းလေး ကတော့ အများ သိပြီးလဲ ဖြစ်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဆရာမလေးကို လေးစားကြည်ညို လွန်းလို့ မျှလိုက်ပါတယ်။
14th December 2012 သောကြာနေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့
အမေရိက နိုင်ငံ Connecticut ပြည်နယ် Newtown မြို့ Sandy Hook Elementary School သေနတ်ပစ်မှု ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတွေ ထဲ က သတင်းလေး တစ်ခုပါ။
အဲဒီ ဆရာမလေး အမည်က Victoria Soto အသက် ၂၇။
အပြင်က သေနတ်သံတွေ ကြားလိုက်ချိန် မှာ သူ့ရဲ့ ပထမတန်း ကလေးတွေ ကို အခန်းထဲက ဘီဒိုထဲ ဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
သူမ ကတော့ ဝင်လာတဲ့ သေနတ်သမားကို ကလေးတွေ ဒီမှာမရှိဘူး။ အားကစားခန်းသွားနေတယ် လို့ ပြောပြီး သေနတ်သမား ရဲ့ ကျည်ဆန် ကို ကလေးတွေ အတွက် ယူခဲ့လိုက်ပါတယ်။
သူအလွန်ချစ်တဲ့ အလုပ် ကို လုပ်ရင်း သူ ချစ်တဲ့ ကလေးတွေ အတွက် သူ့အသက်ကို စွန့်ခဲ့တာပါ။
သူပါ ဝင်ပုန်းနေရင် ဟိုက အားလုံးကို ရှာပြီး ပစ် သွားမှာ မဟုတ်လား။
ဆရာမလေး ကို အလေးအမြတ်ထား ဦးညွတ်လိုက် ပါတယ်။
အဲဒီ ကျောင်းလေးက အင်မတန် နာမည်ရတဲ့ ကျောင်းလေးပါ။
အင်မတန်ကြိုးစား တဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ကတော့ သေနတ်သမားရဲ့ ပထဆုံး victim တဲ့။
အင်မတန်တော်ပြီးအလုပ်ကို ချစ်တဲ့ သူတွေ နဲ့
အနာဂါတ် မှာ ကမ္ဘာကို အကျိုးပြုမဲ့ ကလေးငယ် လေးတွေ
နောက်ဘဝ ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် ဒါမျိုး အဖြစ်ဆိုး တွေ ဘယ်တော့မှမကြုံကြပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Victoria Soto Shot Dead After Saving Pupils
Victoria Soto, 27, managed to hide pupils in cupboards at the Sandy Hook Elementary School as the gunman Adam Lanza was killing others.
Wiping away tears, her sibling Carlee Soto told the crowd: “My sister truly isahero.
“I’m very proud to say she is my sister and we have definitely lost an amazing person.
“She died doing what she loved, protecting the kids that meant the world to her.”
It is thought Soto died trying to shield her students. According toacousin, Jim Wiltsie,apolice officer, said the family had been told that Soto was attempting to get her class intoacloset when the gunman entered the room. “In our eyes, she’sahero,” Wiltsie told ABC News.
“She was trying to shield, getting her children intoacloset and protect them from harm. And by doing that put herself between the gunman and the children and that is when she was tragically shot and killed.”
“Her life dream was to beateacher and her instincts kicked in when she saw there was harm coming towards her students,” he told ABC News, adding: “She lost her life doing what she loved. She loved her kids. Her goal in life was to beateacher to mould young minds.”
Her desire to educate started at an early age, those close to the teacher said. As well as teaching first grade, Soto was also studying foramaster’s degree in special education at Southern Connecticut State University. She graduated from Eastern Connecticut State University with an elementary education and history degree. “I haveapassion for learning,” she wrote on her online teacher’s page.
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပေါ်မှာ ကောင်မလေးတွေ ဘောင်ဘီ ၀တ်ပြီးတက်ရင်၊ မေ့ ပြီးဖိနပ်မချွတ်မိရင် ၊ ချစ်သူတို့နှစ်ဦးလက်ချင်းတွဲမိ၊ ပုခုံးဖက်မိရင်
ကြိမ်လုံးနဲ့ လိုက် ရိုက်နေ သတဲ့ ။ မြန်မာ ပြည် ဟာ တာလီဘန်တွေများ အုပ်ချုပ်နေပြီလားလို့ 
စဉ်းစားမိပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဒီလိုရို်က်နက်ဆုံးမ နေရတဲ့လူမျိုးတွေလား။
ဘုရားဖူးရင်း လိပ်ဥတူးတဲ့ လက်ဝဲ အစွန်းရောက်တွေရော..
ကြိမ်ကိုင်တဲ့ လက်ယာ အစွန်းရောက်တွေရော …
လူတွေကလည်း လူတွေပဲလေ… ဘုရားပရဝုဏ်မှာ ဘုရားပေါ် ချောင်ကြိုချောင်ကြားမှာ သောင်းကျန်းတဲ့ စုံတွဲတွေကြောင့် စည်းကမ်းတွေ ကြပ်ရတာ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါပဲ။ အယင်ကဆို ကျိုက်ထီးရိုးသွားရင် နတ်ကြီးသတဲ့၊ စည်းစောင့်ရတယ်။ အခုများ စုံတွဲတွေ ဟန်းနီးမွန်းသွားရာ၊ အပျော်ကြူးရာ ခရီးဖြစ်လို့.. ဘယ်သူလွန်သလဲပြော……..။
မနေ့ကရေဒီယိုထဲကြားလိုက်ရသမို့.. တင်ပေးတာပါ..။ ငှက်ဖျားဆေးအတု.. အထူးသဖြင့်.. စံချိန်မမှီတဲ့ဆေးတေ၊ွကြောင့်.. ငှက်ဖျားပိုးက.. ပိုပြင်းထန်ပြီး.. လူတွေဆေးပြီးကုန်ကြတယ်တဲ့..
အတုဆို.. တခြားဂျုံနဲ့လုပ်ထားတာကမှတော်သေးတယ်..။ ဆေးအာနိသင်မပြည့်တာ.. ဆေးတလုံး ၁၀လုံးပွားတာမျိုးလုပ်ထားတော့.. လူသတ်လက်နက်ဖြစ်သွားပုံရပါတယ်..
ဆေးအတုသမားကို..လူသတ်သမားလို.. သဘောထား.. ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသင့်ကြောင်း..။
In rural areas of Myanmar, villagers can buy inexpensive packets of drugs, called Ya Chut, when they have malaria. But these local remedies often don’t contain adequate amounts of malaria medicines.
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက “ဘ၀သံသရာ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် အင်မတန် နာမည်ကြီးပါတယ်။ ကြည့်တော့ မကြည့်ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ထဲက သီချင်းကို ခဏခဏ ကြားဖူးလို့ စာသားတွေခုထိ မှတ်မိနေပါတယ်။ “ဘဝသံသရာတဲ့ ရှည်လျားထွေပြား မနေမနား၊ တသွားတည်း သွားရတာ”။ အခုတစ်လော ဟိုသွားရ၊ ဒီသွားရနဲ့ ရပ်နားခြင်း မရှိသလို ဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသရာ ခရီးသည်လိုလို၊ အခြေတကျ မရှိတဲ့ သိုးထိန်းအုပ်စုဝင် လိုလို ခံစားမိပါတယ်။ သွားပုံလာပုံကလည်း လွယ်လွယ်တည့်တည့် မဟုတ်ပါဘူး။ မုံရွာသွားဖို့ နေပြည်တော်ကနေ ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်နဲ့ဆင်း၊ နောက်လေယာဉ်နဲ့ပဲ ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးတက်၊ မန္တလေးက မုံရွာကို ကားနဲ့သွား၊ မုံရွာကတခါ နေပြည်တော်ကားနဲ့ပြန်၊ နောက်တစ်ကျော့ ကြတော့ လေယာဉ်နဲ့ပဲ ရန်ကုန်ပြန်ဆင်း၊ အလုပ်တွေ ပြီးတော့ နေပြည်တော် ပြန်တက်၊ နေပြည်တော်က တောင်တွင်းကြီး၊ နတ်မောက်၊ မကွေးကားနဲ့သွား၊ မကွေးကနေ ညောင်ဦးကားနဲ့သွားပြီး ညောင်ဦးက ရန်ကုန်လေယာဉ်နဲ့ ပြန်ဆင်း။
ဘဝခရီးမှာ ပါလာတာကတော့ ကံနဲ့ လောကဓံပါ။ ဘဝရဲ့ ယခုအပိုင်းမှာတော့ ခရီးရှည်ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်မြို့တွင်း ခရီးတိုလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ အဖော်တွေက ဒေါက်တာတင်မာအောင်ရယ်၊ သူ့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းရယ်၊ စာရွက်စာတမ်းတွေရယ်၊ အချိန်ကိုအမြဲ လုလုပ်နေရတာကြောင့် ကားထဲကပဲ ဖုန်းနဲ့ လုပ်စရာတွေ တော်တော်များများ လုပ်ရပါတယ်။ ဒေါက်တာတင်မာအောင်က “No, No, No” တွင်တွင်ပြောနေပြီ ဆိုရင်တော့ ဟိုဘက်က ပြောတာ မကြားရပေမယ့် အသည်းအမည်း တွေ့ချင်ပါတယ် ပြောနေသူ တစ်ယောက်ယောက်ကို အသည်းအသန် ငြင်းနေရတယ် ဆိုတာ သိနေပါပြီ။
နေပြည်တော်က မကွေးခရီးစဉ် တစ်လျောက် ရှုးခင်းတွေက စုံပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ တောင်ပတ်လမ်းတွေနဲ့ လှပသာယာတယ်။ မြေပြန့်ကို ရောက်တော့ ထန်းတောလေးတွေ၊ ရွာတွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ အိပ်စက်နေတဲ့ အုတ်ဂူလေးတွေကတော့ လွမ်းစရာ၊ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ခရီးသွားတိုင်း အမြင်သစ်၊ အတွေးသစ်တွေ အမြဲရပါတယ်။ ခဏခဏ ခရီးသွားရလို့ ကျွန်မအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာကတော့ ခွေးလေးတိုင်ချီးတိုးကို ထားခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ “သွားပြီ ပြန်လာမယ်”လို့တော့ အမြဲပြောသွားပေမယ့် သူကတော့ ဘယ်နားလည်ရှာမလဲ။ ဘယ်တော့ ပြန်ပေါ်လာမလဲ ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ခရီးက ၁၉ ရက်တောင် ကြာခဲ့တော့ ပြန်လာစအခါမှာ တိုင်ချီးတိုး ကျွန်မကို လုံးဝသူ့မျက်စိ အောက်က အပျောက်မခံနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့နားက သွားတော့မယ် ထင်တာနဲ့ ကျွန်မခြေတောက်တွေကို ဖက်ထားတယ်။ ညအိပ်တဲ့ အခါမှာလည်း သူ့ကိုနဲ့ ကျွမခြေတောက်တွေကို ကပ်ပြီးအိပ်တယ်။ သူ့နားက ခွဲခွာသွားစေတာ ဒီခြေတောက်တွေပဲ၊ လွှတ်ထားလို့တော့ မဖြစ်ဘူးလို့ ထင်ပုံရတယ်။ ကျွန်မ ခဏခဏ ထွက်သွားရတဲ့ အကြောင်းတွေကို တိုင်ချီးတိုးသာ သိရင် ဘာများလုပ်မလဲလို့ တခါတရံ တွေးမိပါတယ်။ ဒီတပတ်တော့ ဒီမျှသာ။
ဒီလှိုင်းဂျာနယ်မှာ အပတ်စဉ်ပါတဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ ဒီစကားနဲ့ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဆောင်းပါတွေ အတော်ကောင်းတယ်။
လူတိုင်းကို ဖတ်စေချင်နေတာ။ :hee:
Facebook ထဲမှာ တစ်ပိုင်းတစ်စ လေး တွေ့ပေမဲ့ အခုမှ အစအဆုံး ဖတ်ရပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီစကား ထွက်တိုင်း ဖတ်ရသူ တစ်ယောက်ယောက် က မျှပေးရင် အလွန်ဘဲ ကောင်းမှာ။
မန္တလေးကြာနီကန် သုသာန်မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်
ဒီဇင်ဘာလ(၁၉) ရက်နေ့မွန်းလွဲ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ ကုန်ထုတ် ဓါတုဗေဒ မဟာတန်း ကျောင်းသူလေး အသုဘ မီးသဂြိင်္ုလ်ခါနီး မိခင်ဖြစ်သူမှ နောက်ဆုံး အနေနှင့် နမ်းလိုက်စဉ် နှလုံးခုန်သံ ကြားရ၍ ဆရာဝန်ပင့် စမ်းသပ်ရာ အသက်ရှင် နေကြောင်း သိရပြီး သေရွာကပြန်ရှင်လာတဲ့ ကောင်မလေးကို မြို့နာမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ မြို့ထဲကို အ၀င်မခံဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းလေး သစ်ထူးလွင်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်
မှန် မမှန်ဆိုတာတော့ မသိ (မန်းလေးသားများ အတည်ပြုပေးကြပါ )
မှန်တဲ့ သတင်း ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကို လွဲမှားပြီး ခေတ်နဲ့မလျှော်ညီတဲ့ အယူအစွဲတွေ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဘို့ လိုနေပါပြီ
သူများ ကို မထိခိုက်တဲ့ အစွဲတွေ အတွက် ဘာမှ မပြောလိုပေမဲ့
အခု အစွဲတွေကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့် မရှိသင့်တော့ပါဘူး
အဲဒီကလေးမ သာ ကိုယ့်ရဲ့ သမီး တူမ ညီမ အမ ဖြစ်ရင် ဆို တဲ့ စိတ်လေး မွေးကြည့်ကြပါဦး
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့အမည် အတိအကျ မသိသည့် ကရင်သောင်းကျန်းသူများ က ကားတစ်စီးလျှင် ၅ သိန်းနှုန်းဖြင့် ကားအစီး ၂၀၀ အတွက် သိန်းတစ်ထောင် ပေးရန် လာရောက်တောင်းရမ်းခဲ့ပြီး မပေးနိုင်သဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကျိုက်ထီးရိုးသို့ ရောက်ရှိနေသူ တစ်ဦးမှ ပြောခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ကျိုက်ထီးရိုး ဂေါပက အဖွဲ့မှ ကားများကို ရင်ပြင်တော်အထိ မောင်းနှင်ခွင့် ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ရသေ့ တောင်မှ ဈေးရောင်းချသူများမှ ၄င်းတို့နေရာသို့ ဘုရားဖူးများ အလာနည်းသဖြင့် မကျေနပ်ကြရာမှ အစပြုခဲ့သည်ဟု အနီးပတ်ဝန်းကျင် ဈေးဆိုင်များမှ ပြောပြခဲ့သည်။ ယခင်က ကင်ပွန်းစခန်းမှ ကြူကြူဝင်း ယိုစုံ ဆိုင်မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ယာဉ်တစ်စီးအား အဆိုပါ ကရင်အဖွဲ့မှ တောထဲသို့ ခေါ်သွားပြီး ကားကို ချိပ်ပိတ်မည် ( ကားမီးရှို့၊လူသတ် ဖျောက်ဖျက်ခြင်း) ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ဖူးသည်ဟု ဆိုင်လုပ်သား တစ်ဦးမှ ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကရင်သောင်းကျန်းသူများမှ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ တွင် ပေးရန် ပြောခဲ့သော်လည်း မပေးနိုင်သဖြင့် ကင်ပွန်း စခန်းမှ ၁၀ မိနစ် စခန်းတွင် ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိကြောင်း၊ ၂၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးရန် ပြောသဖြင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ ငွေကြေးစုဆောင်းမှုများ ပြုလုပ်နေရကြောင်း၊ အဆိုပါ သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့မှာ ထိုနေရာမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မိနစ် ၂၀ သွားလျှင် ရောက်နိုင်သည့် နေရာတွင် ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မနက်ကတော့ ဟုတ်သလိုလို နဲ့.. ဒီညနေတော့.. အဲ့ဒီ သတင်းကြီးက မဟုတ်ဘူးလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့.. ခရီးထွက်ချင်ပါတယ် ဆိုမှ.. ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူး
မနေ့က ကျိုက်ထီးရိုးမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ လူတစ်ဦးကတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ် …
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ကရင်သောင်ကျန်းသူ အမည်မသိအဖွဲ့မှ ကားများအား ပိုက်ဆံတောင်းခြင်းနှင့် လက်နက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းတို့မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ကျိုက်ထီးရိုးဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းအရ ကားတစ်စီးလျင် ကျပ် ၅ သိန်း၊အစီးနှစ်ရာစာအတွက် ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ပေးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ကင်ပွန်းစခန်းတွင် ၁၀ မိနစ်ခန့် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ယာဉ်ပိုင်ရှင်များမှာလည်း ၂၁ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျိုက်ထီးရိုးဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးစံမြင့်က ”လက်ရှိအချိန်ထိ ဘာပြသာနာမှ မရှိပါဘူး။နောက်ပြီး သူတို့အနေနဲ့ ဒီကလမ်းကို ခဏဖြတ် သွားတဲ့သဘောပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း ပေးသုံးခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေဟာ လုပ်ကြံတဲ့ အဖြစ်မျိုး ပေါက်ရောက်နေပါ တယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။
”ကျွန်တော်တို့ ကြားရတာကတော့ KDU အဖွဲလို့ ကြားပါတယ်။နောက်ပြီး သူတို့အနေနဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးဝင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့လူကြီးတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ အောက်လက်ငယ်သား အချို့က လာရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ပိုက်ဆံတောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့အနေနဲ့ မှားရမ်းပြုလုပ်မိတဲ့အတွက် ညတွင်းချင်းပဲ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ဖြန်ဖြေရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ပြန်လည် တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုတွေလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး”ဟု ကျိုက်ထီးရိုး တောင်တက်ကားအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဝင်တင်မှ ပြောခဲ့သည်။
ကျိုက်ထီးရိုး တောင်တက်ကားအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဝင်တင်မဟုတ်ပါ ။
နောက်တဆင့်ကတော့.. ယူအန်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်မှာ.. မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေ အမှုထမ်းနိုင်ဖို့ပါ..
The United States will take “nascent steps” to establish military ties with Myanmar to support “reform efforts” in the Southeast Asian country, …
Bangkok Post-18 hours ago
WASHINGTON, Dec 19, 2012 (AFP) – The United States is poised to take “nascent steps” to open up military ties with Myanmar asaway of …
တရုတ်မှာတော့ မနက်ဖြန် ကမ္ဘာပျက်မယ် သတင်းထုတ်သူတွေ ကို ဖမ်းနေခဲ့ပြီ။
နဲနဲ စဉ်းစားကြည့်တော့ အဲဒီ အဖွဲ့က အစွန်းရောက် ခရစ်ယာန် တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
မနက်ဖြန် က Judgement Day ဖြစ်တော့မှာမို့ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သူတွေ အားလုံး ငရဲ ရောက်တော့မယ် လို့ ပြောတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလဲ ဒါမျိုးရှိတတ်တာမို့ တစ်ခါတစ်ခါ ပြုံးမိတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ မဟုတ်ရင် တစ်ခြားသူ တွေ အားလုံး ငရဲ က မလွတ်ဘူး။
အပြန်အလှန် ငရဲ ကို တွန်းနေကြတာ။
(သတင်း ကို ထင်ရာ ဆက်တွေး တာနော်။ အမှန်မဟုတ်ဘူး )
Maya calendar အခြေစိုက် က တောင်အမေရိကတိုက် မှာ ဆိုတော့ အဲဒီ က သန်းခေါင် ထိ စောင့်ကြရမှာ။
မြန်မာ စံတော်ချိန် ဆိုရင် စနေနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲ ကျော်မှ စိတ်ချ ရမှာ ပါ။
Myanmar is 12:30 hours ahead of Mexico.
.. မင်းက..ဒါတွေဒါတွေလုပ်တယ်.. ငရဲသွား.. (ဒါမှမဟုတ်).. သေရင်ငရဲရောက်မယ်..။
မင်းကဒါတွေဒါတွေလုပ်တယ်.. နတ်ပြည်သွား..( ဒါမှမဟုတ်). သေရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်.. ဆိုတဲ့..
.. “ပွဲစား”( ပြောပြီး… ကိုယ့်အကျိုးအတွက်.. ပွဲခ(အကျိုးအမြတ်ရယူခံစား)ယူသူ) တွေ.. ဖန်တီးထားတာတွေပါ..
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ.. လွတ်လပ်စွာသုံးနိုင်တဲ့နေ့တနေ့ကို… ရောက်လာနိုင်ကြောင်း.
ဆေးအတုသမားကို..လူသတ်သမားလို.. သဘောထား.. ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသင့်ကြောင်း..
တရုတ် အမေရိကန်တို့ ကွဲပြားတဲ့ အခြေခံစိတ် (http://cammlek.blogspot.com/)
အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေက တလေးတစား သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပေးတယ်၊ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက ” No point talking about it ” ဒီအကြောင်းပြောနေလို့ ဘာ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာတုန်း လို့ ဖြေတယ်။
လက်နက် ” ကွဲ ” တာကလွဲရင် အကြမ်းဖက်လိုမှု စိတ်ရိုင်းကတော့ အတူတူ ပါပဲ။
BEIJING – There were fewer children injured and no deaths inaknife attack ataschool in China that happened on the same day as the Sandy Hook Elementary School massacre in the United States. But the soul-searching is no less intense.
In the attack in China – the latest inaseries of similar incidents since 2010 –aknife-wielding man slashed 22 children inaprimary school in Guangshan county in central Henan province. Coincidentally, it happened last Friday, the same day 20 pupils were murdered in the Connecticut school.
အချုပ်ခန်းမှ ထွက်ပြေး သွားသည့် ဖောက်ထွင်း ဝိဇ္ဇာ ကို ၁၀ ရက် အကြာတွင် ဖမ်းမိ
မည်သည့် သော့ အမျိုးအစား ကိုမဆို ငါးစက္ကန့် တွင်း ဖျက်ဆီး နိုင်စွမ်း ရှိပြီး ဖောက်ထွင်း မှုပေါင်း ၂၆ မှု ကျုးလွန် ထားပြီး မင်္ဂလာ တောင်ညွန့် တရားရုံး အချုပ်မှ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားသည့် ဖောက်ထွင်း ဝိဇ္ဇာ နှစ်ဦးကို ၁၀ ရက် အကြာတွင် လားရှိုး မြို့တွင် ပြန်လည် ဖမ်းဆီး ရမိ ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံမှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။
နေရာ အနှံ့တွင် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ် ကြေငြာ ခဲ့ပြီး ၁၀ ရက် အကြာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် နေ့လည် ၁ နာရီ တွင် လားရှိုးမြို့ ၈ ရက်ကွက် တွင် သိမ်းနီ လမ်းမပေါ် အရောက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒုစရိုက် နိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့ နှင့် ပူးပေါင်းကာ လက်ရ ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ပြီး တရားခံ များကို လားရှိုး အမှတ် ( ၁ ) ရဲစခန်း တွင် ခေတ္တ ထိန်းသိမ်း ထားကြောင်း ရဲစခန်းနှင့် မှုခင်း မှတ်တမ်း များ အရ သိရသည်။
ရှိုးဂန်း ( ခ ) စံလင်းအောင် ( ခ ) ဟာမစ် ၂၇ နှစ်နှင့် ကျော်ဇေယျာလင်း ( ခ ) ဖိုးကျော် ၂၇ နှစ် တို့ကို တိုက်ကြီး မြို့နယ်၊ ဂုံးတန်း ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကောက်ကွေးတန်း ကျေးရွာ တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ အချိန်တွင် ဖောက်ထွင်းမှု ဖြင့် ဖမ်းဆီး ရမိ ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲ အချိန် ခန့်တွင် တရား ရုံးတွင် ရုံးထုတ်စဉ် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံမှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။
ဖမ်းဆီး ရမိသူ များကို မင်္ဂလာ တောင်ညွန့် ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှု ပေါင်း ၅ မှု၊ ပုဇွန်တောင် ရဲ စခန်းမှ ပြစ်မှုပေါင်း ၃ မှု၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုပေါင်း ၂ မှု၊ တာမွေ ရဲစခန်းမှ ၂ မှု၊ အလုံ ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုပေါင်း ၂ မှု၊ ကမာရွတ် ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုပေါင်း ၄ မှု၊ လှိုင် ရဲစခန်းမှ ( ပ ) ၁၂၁ / ၁၀၁၂၊ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၈၀၊ ကြည့်မြင်တိုင် ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုပေါင်း ၃ မှု၊ စမ်းချောင်း ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုပေါင်း ၂ မှု၊ အင်းစိန် ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုပေါင်း ၂ မှုဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ထားကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ထားတဲ့ သတင်းလေးတွေ့လို့ပါ..
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. အဲ့လို ဘယ်သော့မျိုးကိုမဆို ၅စက္ကန့် အတွင်း ဖျက်စီးနိုင်တယ် ဆိုတော့ ဘယ်လို သော့မျိုးနဲ့ ထိန်းထားမလဲဟင်… ရုပ်ရှင်တွေ အကြည့်များလို့ စိတ်ကူးယဉ်သလို ဖြစ်နေမလား မသိဘူးနော်..
လပ်စ်ဗေးဂတ်မှာ.. တိုင်းပြည်ဂုဏ်ဆောင် မျက်လှည့်ဆရာဖြစ်မှာသေချာတယ်..
မနေ့က ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့မှာ တကယ်ကို ကမ္ဘာပျက်သွားတဲ့ လူ ရှိတယ်..
ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်မြောင်းလမ်းနှင့် မလွှကုန်းလမ်းထောင့်ရှိ ဖြိုဖျက်နေဆဲ နှစ်ထပ်တိုက် ပြိုကျမှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး
ရန်ကုန်မြို့ကျောက်မြောင်းလမ်းနှင့် မလွှကုန်းလမ်းထောင့်ရှိ ဖြိုဖျက်နေဆဲ နှစ်ထပ်တိုက်သည် ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့) မွန်းလွဲ တစ်နာရီ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့်က ပြိုကျခဲ့သဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါတိုက်ပြိုကျမှုကြောင့် တိုက်ရှေ့တွင် အိပ်ပျော်နေသည့် တိုက်ဖြိုသည့် အလုပ်သမားများအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးသော ထမင်းချက် အမျိုးသမီး တိုက်ပိ၍ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာဖဂန်မှာလည်း တရုတ်ကြေးနီသတ္တုတွင်းက ဗုဒ်ဓရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ဖျက်ဆီးဖို့ပြင်နေကြောင်း…
နူကလီးယားနည်းပညာသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ သုတေသနနှင့် စွမ်းအင်အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီး ဗုံးလက်နက်လုပ်ရန်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြောကြား..
တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမားတဲ့.. ဆိုးဆေးတွေ အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ သတင်း ဗွီဒီယိုလေးပါ။
ရေတွင်းလေး သို့ အပြန် ( မိုးသီး )
ကျနော်ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကျနော်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ရပ်ကွက် ကိုသွားကြည့်တယ်။
ရပ်ကွက်က သင်္ကန်းကျွန်း မိကျောင်းကန် အပိုင်း ၁ ရပ်ကွက်။ ၁၉ ၉ ၁ ခုနှစ်မှာ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက် ကို ဦးသန်းရွှေ အစိုးရလက်ထက်မှာသိမ်းဆည်းသွားတယ်။
ကျနော်တို့ ကိုကျူးကျော်သူတွေလုို့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ရပ်ကွက်ကို အမြန်ဖျက်ကြဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ နိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်။ အနိင်ကျင့်ခဲ့ကြတယ်။ လူတွေပထမတော့တောင့်ခံသေးတယ်။နောက်တော့ တယောက်ခြင်းရွေ့ ပေးခဲ့ကြရတယ်။
အဖေ နဲ့နိုင်ချစ်သောင်းတို့နှစ်အိမ် သုံးအိမ်ပဲကျန်တော့တယ်။ ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။
နောက်တော့ ဘူဆိုဇာတွေနဲ့ လာထိုးတော့မှာ ကျနော်နဲ့နိင်ချစ်သောင်း ( မွန်) ကိုစိုးမင်း( ရခိုင်) တို့ဟာ လက်လျော့ပေးလိုက်ကြရတယ်။
၁၉ ၇၀ ခုနစ်ခန့် မှာ အဖေဟာ အိမ်ကို ပျဉ်းကတိုးခြောက်ပတ်လည်တွေနဲ့ ဆောက်ခဲတယ်။ အိမ်က ရပ်ကွက်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးပါ။ အကြီးဆုံးအိမ်ကြီးပါ။အိမ်ပေါ်ကနေ ရွှေတိဂုံဘုရားကိုမြင်ရပါတယ်။ သိပ်လှပါတယ်။
ပျဉ်းကတိုးရှာထိုးတွေခင်းထားတဲ့အတွက် အေးတယ်။ မြန်မာတွေက ကျွန်းကိုမကြိုက်ကြဘူးကျွန်းကပူတယ် လုို့ ကျနော်အဖိုးပြောတယ်။ ပျဉ်းကတိုးကအေးတယ်။
ဒီအိမ်ကြီးကိုဖျက်တော့ အိမ်မှာအရွယ်ရောက်ယောက်ကျားလေးတွေမရှိတော့ဘူး။ ကျနော်ကတောထဲမှာ ကျန် ညီအကိုများက နိင်ငံခြားကိုရောက်ကုန်ပြီ။
ဒီတော့အဖေနဲ့အမတွေ ကိုယ်အိမ်ကိုကိုယ်ဖျက်ကြတယ်။ အဖေတော်တော်ပင်ပန်းသွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီလအကြာမှ ဆုံးသွားတယ်။
ဒီအ်ိမ်တလုံးဝယ်နိင်ဖုို့ အတွက်သူ စစ်တပ်ထဲမှာ ၂၅ နှစ်အမှုထမ်းခဲ့ရတယ်။
၁၉ ၆၇ ခုနစ်လောက်မှာ မြေကွက်ကို ၃ထောက်ကျပ်နဲ့ဝယ်ခဲ့တာ။ ပင်စင်ရောင်းပြီးဝယ်လိုက်တာလို့ ဆိုတယ်။ သူဝင်ခဲ့တဲ့တပ်က သူမြေကိုသိမ်းခဲ့ပြီလေ။
ဒီမြေကွက်လပ်ကို အလွမ်းပြေသွားကြည့်ဖို့ ကျနော်ရဲဘော်တွေနဲ့ညနေစောင်းမှာထွက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့ ကားလေးနဲ့ကျနော်တို့ ထွက်လာတယ်။ နေရာကိုကျနော်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကားတစီးနဲ့တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေတယ်။
အကိုကြီး ဘယ်သွားမလို့ လဲ လို့ မေးလာတော့မှ ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ကိုရှာနေတာလုို့ ပြောတော့ သူတို့ နောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်။
သူတို့ လိုက်ပြတယ်။ ကျနော်တို့နေရာကို မနည်းရှာယူတယ်။ ကျနော်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ၂၄ နှစ်အတွင်းမှာအတော်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ကျနော်စားခဲ့တဲ့ ခါတော်မှီ မုန့် ဟင်းခါးဆိုင်၊
မအုန်းဘိန်းမုန့် ဆိုင် ၊ ကိုကျော်မြ လဘက်ရည်ဆိုင်၊ ဦးရခိုင်ကြီး ဆံပင်ညပ်ဆိုင်မရှိတော့ဘူး။
ကျနော်တို့ ကျော်စိုးတို့ ဘောကန်ခဲ့တဲ့ကွင်းလေးက ဘယ်နေရာရောက်မှန်းမသိတော့ဘူး။
ကျနော်အိမ်မြေကွက်က ဝေဇန္တယာလမ်းမကြီးနဲ့ပြည်သာယာလမ်းမထောင့်က အိမ်ဆိုတော့ကျနော် မှန်းလို့ ရလာတယ် ။ သေချာသွားတာကတော့ ကျနော်တူးခဲ့တဲ့ရေတွင်းလေးကို တွေ့ ရတာပါပဲ။
ကျနော်မိတ်ဆွေတွေမရှိတော့ပဲ ကျနော်တူးခဲ့တဲ့ရေတွင်းလေးကိုပဲ ကွက်လပ်ထဲမှာတွေ့ ရတယ်။
ပတ်ပတ်လည်က စိုက်ခင်းတွေလုပ်ထားတယ်။ စိုက်ခင်းဆိုတာကလဲ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လောက်ထားတဲ့စိုက်ခင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။
တယောက်ယောက်က စိုက်ထားပုံပါ။ စိုက်ခင်း အတွက် ကျနော်တူးထားတဲ့ရေတွင်းလေးကရေ ကို သုံးနေတာကို တွေ့ ရတယ်။
ကျနော်ရဲဘော်က ဒီနေရာလား လို့ ကျနော့်ကိုမေးတယ်။ ကျနော်ကဟုတ်တယ်လုို့ ပြောတယ် ။ အားလုံးက စိုက်ခင်းဖြစ်နေတယ်။ ဦးပြုံးဟုတ်အိမ်၊ ဒေါ်အေးမိတို့ အိမ်တွေဖက် ကိုလှမ်းကြည့်မိနေတယ်။ ဖုန်းဆိုတောကြီးမျှသာဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ မြေကွက်လို့ မှတ်မိ
စေတာကတော့ ဒီနေရာမှာရေတွင်းဆိုလိုတတွင်းပဲရှိတာကိုး။ အားလုံးက ကျနော်တို့ ရေတွင်းကိုသောက်ရေအတွက်လာခပ်ကြတာမှတ်မိတယ်။
ပါလာတဲ့ရဲဘော်တွေကို ကျနော်က ဒါကိုယ် အမေအတွက်တူးပေးခဲ့တဲ့ရေတွင်းပဲလုို့ ပြောပြမိတယ်။
ဒီတွင်းကို ကျနော် ၁၈နှစ်လောက်မှာတူးတာ။ ကျနော်တို့ အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ တူးတာ။ အိမ်ခေါင်းရင်းက တောင်ကုန်းကြီး။ ကြာခတ်ဝါးရုံပင်ကြီးတွေရှိတယ်။ တယောက်ထဲတူးပြစ်လိုက်တာ ၅ ရက်လောက်ပဲကြာတယ်။ ရေတွေထွက်လာတော့ ကျနော် ပင်ပန်းသမျှပျောက်သွားတယ် ။
ရေတွေက စိမ့် ပေါက်လေးတွေက ထွက်လာကြတယ်။ အေးနေတယ်။ကြည်လင်နေတယ်။
အားပါးတရ ကျနော်ဆက်တူးတယ်။ ရေထွက်အားကသိပ်ကောင်းတော့ ပက်မနိင်တော့ရပ်လိုက်ရတယ်။ ၁၀ ပေလောက်ရှိမယ်။
အမေကရေတွင်း တတွင်းထပ်ရတော့ သိပ်ဝမ်းသာနေတယ်။
ကျနော့် ဘ၀တလျောက်လုံးမှာ အမေအတွက် ကျနော်ပေးနိင်ခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဟာ ဒီရေတွင်းပဲရှိခဲ့တယ်။
အမေက မနက်စောစောထတယ်။ သိမ်းကြီးဈေးမှာဆိုင်မထွက်ခင်ဘုရားရှိခိုးတယ်။ ဘုရားပန်းကပ်တယ်။ ဒါကို မနက်တိုင်းသူလုပ်လေ့ရှိတယ်။
အိပ်ရာထရင် ဘုရားပန်းလဲရင်းဓမ္မစကြာ ကိုသူ သီချင်းလို ဆိုလေ့ရှိတယ်။
ဘိက္ခနံ၊ ပဉ္စ ၀ဂီနံ၊ ကုသိပတနေနနာမကေ ။ မိဂရရေ ၊စမ္မ၀ံရံ ….
ဓမ္မစကြာထဲက ဓမ္မပါရ တွေ တပိုင်းတစစီကျနော် အာရုံထဲကို ပြန်ဝင်လာတယ်။
မိဂရ၀ိန် တော နှိုက်ရှိခြင်းကြောင့် …
ဓမ္မစကြာင်္ကိုဆိုရင် .. လူလေးမောင်ဒိန် ထတော့ ကျောင်းသွားတော့လို့ နိုးတာကို ပြန်အမှတ်ရတော့ ကြည်နူးမိလာတယ်။ ပြုံးမိတယ်။
ကျနော်တူးခဲ့တဲ့ရေတွင်းမှာ စိုက်ခင်းလုပ်သားတွေ ရေချိူးနေကြတာကိုတွေ့ ရတော့
ပိတီဖြစ်မိတယ်။ ဒီရေတွင်းလေးက အခုထိ အသုံးဝင်နေသေးပါလား။
မကြင်နာနိင်ရင်လဲ အရင်ဆို မစိမ်းနဲ့ ပြုံး ပြပါလား မိငယ်..
မနက်မိုးလင်းလို့ ဒီကမ္ဘာဒီလောက ကို …. ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ဘူးတဲ့မောင်လိုလူသားတယောက်ဟာ …
ဆိုတဲ့တေးသားဟာ ဆယ်စုနှစ်ထဲက တိတ်တဆိတ်လွင့်ပျုံ လာတယ်။
ဒီသီချင်းက ဘယ်သူအတွက်လဲ .ငါဆိုခဲ့သလဲ…။
အသားညိုညို၊ ပိန်ပိန်၊မြင်မြင် ၊ ပြူးကျယ်စွာကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးများ က တေးသားကြိုကြားမှာစီးမျော်ခဲ့တဲ့ညလေးတွေ။
နွေရာသီမှာတရပ်ကွက်လုံးကရေတွင်းတွေရေခန်းသွားလေ့ရှိတယ်။ ဒီအချိန်မှာသူနဲ့သူညီမတွေ ကျနော်တို့ တွင်းမှာရေလာချိုးတယ်။ သောက်ရေခတ်ကြတယ်။အိမ်ကအမတွေနဲ့သူ ဆူညံစွာပြောဆိုရီမောသံတွေ၊ အနားတိုးရေအိုးပင့်ပေးစဉ်က သူကျ မှ ဆူးဆူးရှရှရှိလှတဲ့ တရော် နဲ့ ကင်ပွန်းသီးနှံ လျိုလ်ဝှက်ထားသောအလှများ။ ရေတွင်းလေးက ဒါတွေကို ကောင်းကောင်းသိမ်းဆည်းထားဆဲ ပါလား။
ကျနော်အရိပ်တွေကို ပြန်တွေ့ မိကြတယ်။
ရေထဲက နုပျိုနေတဲ့ အတိက အရိပ်၊ တွင်းပေါ်က ရင်ရော်သွားတဲ့ ပစ္စုပန်၊ ပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်မိကြတယ်။ မနေ့ တုန်းကလိုပါပဲ။
ကိုမိုးသီး လာဗျ၊ ခင်ဗျားရပ်ကွက်ကလူတွေက ခင်ဗျားကို စောင့်နေကြတယ်။ ရဲလင်းက သတိပေးလိုက်တော့မှာ ကျနော် ပြန်သတိဝင်လာတယ်။
သူတို့ မြေကွက်တွေအတွက် ပြန်တောင်းကြဖို့လက်မှတ်တွေကောက်နေတယ်။ ခင်ဗျား သဘောတူရင် လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ကျနော်တို့ ကို မေးထားတယ်။ ရဲလင်း ကပြောလာတယ်။
ကျနော်တို့ဒဂုံတောင်ဖက်ကို ကားဆက်မောင်းလာကြတယ်။
ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်က လူတွေက ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးမှာ အတက်ကြွဆုံးပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ အခုမြောက်ဒဂုံကိုအရွေ့ ခံရတယ်။ ပွက်တွေထနေတဲ့ ကွင်းကြီးထဲမှာ မြေတကွက် တွေကို ပြန်ဝယ်ယူခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ သူတို့ဆီကို ကျနော်တုို့ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒဂုံတောင်ကိုရောက်တော့ ရပ်ကွက်ထဲကသူတွေစောင့်နေတယ်။ကျနော်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တော့ လက်ခုတ်တွေညံသွားတယ်။ ကျနော်အတွေးကတော့ရေတွင်းလေးဆီ မှာပျံဝဲနေခြင်သေးသပေါ့။
နိုင်ငံရေးအာဏာရမှ အစိုးရအာဏာရမှ ကျမတို့လုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို
တခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေက အာဏာမလိုချင်ဘူးလားလို့ ကျမကမေးလိုက်တော့
ဒါပေမယ့် သူတို့ကဘယ်တော့ မှမှန်မှန်ကန်မဝန်ခံဘူးတဲ့…..
အာဏာလိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး…. ပြည်သူလူထုအတွက်ပါ အစသဖြင့် အဲလိုပြောတယ်တဲ့..
ပြည်သူလူထုအတွက်လုပ်နိုင်ဖို့ ကျမ အာဏာကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေ”
မြိတ်ခရိုင်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် ပြောကြားသောမိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်
ပုံ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ..ဘန်ကောက်မြို့ရာက် ပြည့်တန်ဆာများ
”ပြည့်တန်ဆာမရှိတဲ့ နိုင်ငံဆို တာမရှိပါဘူး၊ ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက ရှိတာပါ။ ပပျောက်အောင်လုပ်တယ် ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပပျောက် အောင်လည်း လုပ်လို့မရပါဘူး”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင် ပြည့်တန်ဆာနှင့်ပတ်သက်၍ တရား ဝင်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးပြီးစနစ် တကျဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ထားကြောင်း၊ ထိုသို့ တရားဝင်လိုင် စင်များချထားပေးပါက 4င်းတို့ကို အခွန်ကောက်ခံကာတိုင်းပြည်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများလည်းရရှိမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြည့်တန်ဆာများကို တရား ဝင်လိုင်စင်ချထားပေးနိုင်ရန် လွှတ် တော်၌ အဆိုပြုတင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း¤င်းကဆက်ပြောသည်။
”လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီဆိုရင် တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ကူးစက် ရောဂါဆိုတာ Sexworker တွေက တစ်ဆင့် အများဆုံး ကူးစက်နေတာ ပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကူး စက်ရောဂါတွေ မဖြစ်နိုင်အောင်ကွန် ဒုံးသုံးရတယ်။ မသုံးရင် Sexworker ရောပျော်ပါးတဲ့သူနှစ်ယောက်စ လုံးကို ပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ပြဌာန်းထားပါတယ်” ဟု မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
HIV,AIDS အပြင် အခြားကူးစက် ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနည်းစေရန် ကွန်ဒုံးသုံးစွဲသင့်ပြီး Sexworker များကို လည်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများပုံမှန် ပြုလုပ်ကာတရားဝင်လိုင်စင်များထုတ် ပေးသင့်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
ယိုးဒယားနိုင်ငံမှာလည်းပဲ၊ ပြည်.တန်ဆာလုပ်ငန်းသည်၊ illegal တ၇ားမဝင်၊ တားမြစ်ထား သော်လည်းပဲ၊ ချူဝစ်ကံမိုဗစ်ဆစ် Chuwit Kamolvisit ဆိုသောသူသည် ဘန်ကောက်တွင် အနှိပ်ခန်းများ ( massage parlour) တော် တော်များများကို ပိုင်ဆိုင်သော Godfaher of Prostitution ပြည်.တန်ဆာဖခင် လို.နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်ပြီး၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံေ၇းတွင်အေ၇းပါသော အာဏာ၇တဦးဖြစ်ခဲ.၇ာက၊ အထက်ပိုင်း ထိတ် သီးနိုင်ငံေ၇း အုပ်ချုပ်သူများ၊ ပုလိပ်များတို.အပါအဝင်၊ အစိုး၇ပိုင်းဆိုင်၇ာ တို.ဟာ ၄င်း၏ ဖောက်သည်များဟု Government, Politicians and Prostitutions ဆိုသော ယိုးဒယား နိုင်ငံအကြောင်း၊ အင်တာနက်မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပေသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော. ပြန်ကြားေ၇းဂန္နဝင်မှတ်တမ်း Documentary တခုမှတ် တမ်း တင် ရိုက်ထားကြောင်း၊ ၄င်းအမည်မှာ “ Trading Women “ ဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင်.၊ အသက် ၁၈ နှစ်ပတ်ဝန်းကျင် မြန်မာအမျိုး သမီးလေး များကို Thailand သို.ခေါ် ဆောင်သွား ကြ ကြောင်း၊ သူဌေးများ၏ ပျော်တော်ဆက်များ၊ ပြည်.တန်ဆာအဖြစ် ခိုင်းစားနေ ကြ ကြောင်း တို.ကို ထုတ်ဖော် ရိုက်ကူးထား သည်.အပြင်၊ အချို.မိန်းခလေးများမှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကန်ဘောဒီးယား၊ လားအိုစ် နှင်. တရုပ် နိုင်ငံများတို.က ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ လူမှု.ဖူလုံေ၇းအဖွဲ.၊ တခြားအမျိုးသမီးများ စောင်.ရှောက်ေ၇းအဖွဲ. အသီးသီးတို.ရှိ၇ာ၊ ကျနော်တို.အားလုံးသည်၊ မီဒီယာများ၏အထောက်အကူတို.ဖြင်.၊ လူအေ၇ာင်းအဝယ်လုပ်စားနေကြသော မသမာသူများတို.ကို၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွပ်ေ၇း၊ ထော်ထုတ်ေ၇း၊ ပပျောက်ေ၇းအသီးသီးစီမံကိန်း ( campaign ) များပြုလုပ်ကြ၇န်နှင်.၊ အမှောက်၇ိပ်အတွင်းသို. ဇွတ်အတင်းသွင်းခြင်းခံခဲ.ကြ၇သော၊ မြန်မာမိန်းခလေးများကို အလင်းသို.ေ၇ာက်၇န် နှင်.ပြန်လည် ကယ်တင်ကြစေေ၇းတို.အတွက် campaign များ၊ ပြုလုပ်သင်.နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တိုက်တွန်း ဆော်အော်၇င်း၊ နိဂုံး ချုပ်လိုက်ပါ၇စေခင်ဗျား။ ။( BY PUBLIC VIEW)
ဒါလေးလည်း ဖတ်လို့ကောင်းတယ်၊ သဂျီးလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အလီကျက်လိုက်ပါအုံး..
http://komoethee.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html( ဒီနေ့ ၁၈.၁၂.၂၀၁၂ မှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ABSDF မှ ရဲဘော်ကြီး ကမ်းပူးချား အမှတ်ယယ စာစု) ဒီဆောင်ပါး ကို ကောင်းကင် နိုင်ငံပြု အနုပညာ စာစောင်မှ ရယူပါတယ်။
အေဘီအက်စ်ကလိန် ( စစ်မှန်သူများကို မဆိုလိုပါ )
အစိုးရသက်သေလုပ်ပြီး ကောင်းစားနေတဲ့ကောင်တွေ ၊ အဲ… ဟိုတလောဆီက သမိုင်းလိမ်တွေကိုတောင် ရေးထုတ်လိုက်သေးတယ်
သမိုင်းအမှန်တွေ ပေါ်လာပါတော့မယ်တဲ့ဗျို့ 
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ သက်တမ်း(၂)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂလိကပိုင်နေ့စဉ်သတင်းစာများအား ထုတ်ဝေခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ခွင့်ပြုရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးတည်းပိုင် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းပိုင်အနေဖြင့် လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါကြောင်း၊ လျှောက်ထားသူသည် နေ့စဉ်သတင်းစာများ ထုတ်ဝေရာတွင် နေရာ၊ ဒေသအလိုက် ထုတ်ဝေလိုခြင်း (သို့မဟုတ်) တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်ဝေလိုခြင်းတို့ကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာသာစကားအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားသား ဘာသာစကား တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်ဝေခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း၊ ထုတ်ဝေခွင့် လျှောက်လွှာများအား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနထံသို့ လိပ်မူလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏၀က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
လျှောက်ထားသူအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များဖြင့် ပြည့်စုံညီညွတ် စေရန်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ (က) လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပြုခံရသူဖြစ်ရမည်။ (ခ) အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (ဂ) သတ်မှတ်ပုံစံပေါ်တွင် ကျပ်တစ်ရာတန် တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ရမည်။ (ဃ) သတင်းစာထုတ်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းထားသည့် ပရိသတ်၊ သတင်းစာ အမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ လိုက်နာစောင့်ထိန်းမည့် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ် (Code of Ethics)၊ သတင်းစာတိုက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံစည်းမျဉ်း (Code of Conduct)၊ သတင်းစာတိုက်၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်မှု(Code of Practice)များ ပါဝင်သည့် အများပြည်သူလက်ခံနိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်း၏ စံနှုန်း (Community Standard) ကို (မြန်မာ။အင်္ဂလိပ်) နှစ်ဘာသာဖြင့် ပူးတွဲ၍ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း (င) ပုံနှိပ်စက်အသစ်တည်ထောင်ပြီး ထုတ်ဝေမည့်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ ရောက်ရှိမှုနေ့စွဲ၊ မှာယူ ထားရှိမှုနှင့် ရောက်ရှိမည့်ခန့်မှန်းနေ့စွဲ၊ အရောင်းအဝယ်ပြေစာ၊ တစ်ဆင့် ဝယ်ယူ ခြင်းအတွက် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်နှင့် ပြည်ပမှမှာယူတင်သွင်းပါက အခွန်ဆောင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းစာရွက်(Duty Slip)တင်ပြရမည်။ (၆ လအတွင်း ရောက်ရှိလာမည့် ပုံနှိပ်စက်များအတွက် ကြိုတင်လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။) (စ)
ရှိပြီးပုံနှိပ်စက်များကို အသုံးပြုသူများအတွက် ပုံနှိပ်သူ သက်သေခံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏၀က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
လှိုင်သာယာမြိနယ်ထဲက လူနေရပ်ကွက်အချို့မှာ ယခုလအတွင်းညစဉ်ရက်ဆက် မီးပျက်နေမှုများရှိတာကြောင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်
စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော် မီးပျက်တာကြောင့်တဲ့ အဟဲ
FMI တို့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ယာတို့ နဝဒေးဥယျာဉ်အိမ်ယာဘက်ကျတော့လည်း ထိန်ထိန်ငြီးလို့
ဒါကတော့ နောက်အမြင်တစ်မျိုး သူကြီးကတော့ သဘောတူမယ်မထင်
အဲ့သတင်းအမှန်ဆိုရင်.. စစ်တပ်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားနေတာလား..
တကယ်အပြုတ်နှံရင် တစ်ပတ်တောင် K.I.A တွေခံနိုင်မယ်မထင်ဘူးရယ်..။
အမိန့်မရဘဲ ပစ်ခတ်ပါက စစ်စည်းကမ်းအတိုင်း ပြင်းထန်စွာ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရသည့် တပ်မှူးများ အစည်းအဝေးတွင် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်းများ အား အထက်အမိန့်မရဘဲ လက်နက်ကြီး အသုံးပြုပါက ပြင်းထန်စွာ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဟု
သတိပေး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိမိတို့ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်မှာ လုံခြုံရေး
အတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတကြီး၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ကာကွယ်ရေး
ဦးစီးချုပ်မှလည်း တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်သည်ကို အားလုံး အသိပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်သော တပ်များအနေဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလာပါက လက်နက်ငယ်
များဖြင့်သာ ပြန်လည် ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံ ခြင်း မပြုဘဲ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပြန်လည် ပစ်ခတ်ပါက စစ်စည်းကမ်းအတိုင်း ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်း ခံရမည် ဟု သတိပေးခဲ့သည်ဟု ပြည်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါသည်။
၄င်းမှ တပ်မှူးများအား အခြေအနေ မေးမြန်းရာ တပ်မှူး တစ်ဦးမှ ငါတို့က နယ်မြေအလိုက် လုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရတာ၊ ငါတို့သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေလဲ ဒီကောင်တွေ အကုန်သိပြီးသား၊ ကိုယ့်ကို လာပစ် လို့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ချက်ချင်း ပြန်မပစ်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က အထိအခိုက်များမှာပဲ လို့ ပြောခဲ့ပါသည်။
အခု လေကြောင်းက ပါနေတယ်ဆိုတာကလည်း လဂျားယန်ကို ရိက္ခာပို့ သွားတဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ကင်းထောက်တဲ့ သဘောပဲ
ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ သူတို့ စခန်းတွေကို သိနေတာပဲ။ အကုန်လုံးကလည်း အမြောက်နဲ့ ပစ်ရင် ထိနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိနေတာ။ စစ်တပ်ရဲ့ အမိန့်နာခံတာကလည်း ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီဘူးဟု ၄င်းက ဆက်ပြီး
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍
မေးမြန်းကြည့်ရာ အခု ABSDF ပါလာမှ ထိတွေ့မှု တွေ ပိုများလာတယ်။ ဒီဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆိုပြီး ပစ်ခတ်တာတွေ မလုပ်တော့ တဖြည်းဖြည်း ပို အတင့်ရဲလာသလိုပဲ။ လက်နက်ကြီးတွေ ဆင်ထားတဲ့ ကုန်းဘေးနားအထိ လာပစ်ရဲကြတယ်။ အခုလက်ရှိတော့ တပ်က တကယ်ကို အကျအဆုံးများနေတယ် လို့ ၄င်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၅၀) တနင်္လာနေ့ ၃၁-၁၂-၂၀၁၂
နှစ်သစ်တစ်ခု စချိန်မှာ နှစ်သစ်သန္နိဋ္ဌာန်တွေ ပြုတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ နှစ်ဟောင်းကုန်ချိန် သန္နိဋ္ဌာန်ချချင်နေတာပါ။ ချပြီး မမြဲနိုင်မှာစိုးတော့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတော့တာပေ့ါ။ တကယ်တော့ လုပ်ချင်တာက ရိုးရိုးလေးပါ။ နှစ်သစ်မကူးမီ၊ အလွန်ဆုံးနေပြည်တော်မတက်မီ ကျွန်မအခန်းတွေ ရှင်းဖို့ပါပဲ။
`အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ´ ဆိုတဲ့ စကားကို နှစ်နှစ်ကာကာကို နှလုံးသွင်းနေရပါတယ်။ ကျွန်မက အားလုံးကို စည်းစနစ်နဲ့ထားတဲ့အကျင့် ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စာအုပ်တွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေဆိုရင် လိုချင်တာကို ချက်ချင်းယူနိုင်အောင် ထားတတ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေဆိုရင် ဘာသာရပ်အလိုက်၊ စာရေးသူအမည် အက္ခရာစဉ်အလိုက် စာကြည့်တိုက်စနစ်နဲ့ထားပြီး စာရွက်စာတမ်းတွေကို ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ အကြောင်းအရာအလိုက် ထားတတ်ပါတယ်။ အ၀တ်အစား၊ အသုံးအဆောင်တွေကိုလည်း အားလုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာထားတော့ လိုချင်တာရှာရတဲ့ အချိ်န်ကုန်ခြင်းတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါတွေက ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့နော်။ အခုကတော့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်နေပါပြီ။
အကျယ်ချုပ်ကလွတ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွတ်လပ်ခြင်းအရသာ ဘယ်လို ခံစားရသလဲလို့ မေးသူတွေ အမြောက်အမြားပဲ ရှိပါတယ်။ စိတ်က လွတ်လပ်နေခဲ့လို့ အမြဲပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လွတ်လပ်သူတစ်ဦးလို့ ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ကျွန်မပြန်ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်စဉ်းစားလိုက်ရင် စိတ်ကသာ လွတ်လပ်တာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ အကျယ်ချုပ်ကျနေသည်ဖြစ်စေ၊ မကျနေသည်ဖြစ်စေ လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အကျယ်ချုပ်ကတော့ အပြင်အလုပ်လုပ်ဖို့ မလွတ်လပ်ဘူး။ အပြင်အလုပ်လုပ်ဖို့ လွတ်လပ်ပြန်တော့ အတွင်းအလုပ်အတွက် အချိန်လွတ်မရှိတော့ပြန်ဘူး။
နံနက်အလုပ်စချိန်က မမှန်ပါဘူး။ လွှတ်တော်တက်နေရတဲ့ ရက်တွေမှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တခြားဘာမှ ချိန်းထားတာမရှိဘူးဆိုရင် သိပ်ပျော်တာပဲ။ ရှင်းလင်းစရာလေးတွေ ရှင်းလို့ရပါတယ်။ နေပြည်တော်က အိမ်ကလည်း ဘာမှသိပ်မရှိတော့ စာရေးစားပွဲပေါ်က ပုံနေတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေက လွဲလို့ သိပ်ပြီးအပန်းကြီးစရာမရှိပါဘူး။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ နှစ်နှစ်လုံးလုံး ပြန်လှည့်မကြည့်နိုင်တဲ့ စာဖတ်ခန်းတွေ၊ စာရေးခန်းတွေနဲ့ အိမ်ခန်းဟာ ညနေအလုပ်ပြီးလို့ တက်လာရင် ထပ်မောချင်စရာပါပဲ။ အောက်ထပ်က အလုပ်ခွင်လိုသုံးတဲ့အခန်းတွေကို တာဝန်ယူပေးတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ ကျွန်မသုံးတဲ့အခန်းတွေကျတော့ ဘယ်သူမှ သိပ်ပြီးကူမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခုခုလိုချင်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ထားမှပဲ ကိုယ်သိတာကိုး။ နောက်ပြီး ကျွန်မက စည်းစနစ်ကြီးလွန်းတော့ အခြားလူတွေလုပ်ဖို့ရာ ခက်လှပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အရှုပ်ထဲမှာ စိတ်ရှင်းအောင် လေ့ကျင့်ပြီး နေနေရတော့တာပေါ့။
ဒီနှစ်မဆုံးမီ ကျွန်မအတွက် လုံးဝအားရက်တစ်ရက်ထားပေးမယ်လို့ ဒေါက်တာတင်မာအောင်က ပြောထားပါတယ်။ အဲဒီရက်ကို စောင့်မျှော်နေပေမဲ့ အပိုင်တော့ မတွက်ထားပါဘူး။ `လုံးဝအားရက်´တွေဟာ `အရေးပေါ်အလုပ်ရက်´တွေ သဏ္ဌာန်ကို ပြောင်းပြောင်းသွားတတ်လွန်းလို့ပါ။ တွက်ကြည့်လိုက်တော့ ၂၀၁၂ အတွင်းမှာ `လုံးဝအားရက်´ ခြောက်ရက်ရခဲ့ပါပြီ။ နောက်တစ်ရက်ပါရမယ်ဆိုရင် ဒီနှစ်အတွက် တစ်ပတ်လုံးပါပဲ။ မဆိုးပါဘူး။ အဲဒီဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ `လုံးဝအားရက်´ လေးကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကြီးပါ။ နံနက်ထတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ တရားထိုင်ခြင်း စတဲ့ အခြားစိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ် ၀တ္တရားတွေကို လုပ်နိုင်မယ်။ ရေချိုးတာလည်း နာရီကိုကြည့်ပြီး လုပ်ဖို့မလိုဘူး။ အစီအစဉ်ချပြီး တစ်နေ့လုံးရှင်းမယ်။ စာအုပ်တွေအားလုံး မစီဖြစ်ရင်တောင်မှ ပုံးတွေထဲက မထုတ်ရသေးတာ ထုတ်ပြီး ဘာသာရပ်အလိုက် ပုံထားမယ်။ တော်ရုံသင့်ရုံ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်လေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တာဟာလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုပါပဲ။
နိုင်ငံအတွက် ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတော့ နှစ်သစ်ရဲ့သန္နိဋ္ဌာန်တွေထဲမှာ ထည့်ရမှာပါ။ ကျွန်မအခန်းတွေ ရှင်းသလောက်သာ နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေရှင်းရတာလွယ်မယ်ဆိုရင်…. အဲဒီလို လက်တွေ့မကျတဲ့ အိပ်မက်တွေကိုတော့ မသိစိတ်နဲ့တောင် မမက်မိပါဘူး။ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး မဟတ္တမဂန္ဒီက ဟိန္ဒူဘာသာကို လေးလေးနက်နက် သက်ဝင်ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ အခြားဘာသာတွေကိုလည်း လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်။ ဂန္ဒီကြီးဟာ ခရစ်ယာန်ဓမ္မသီချင်းများကို နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမှောင်ထုထဲမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ရပ်တည်နိုင်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို အင်မတန်နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တစ်ပုဒ် Abide with Me ကို နှစ်စဉ် မြို့တော်ဒေလီမှာ ကျင်းပတဲ့သမ္မတနိုင်ငံတော်နေ့ (Republic Day) ချီတက်အခမ်းအနားအတွက် လာရောက်ခဲ့ကြတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက တပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံ မိမိတို့ဒေသပြန်ကြတဲ့ Beating of the Retreat နေ့ နေ၀င်ချိန်မှာ တီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂန္ဒီကြီးအနှစ်သက်ဆုံးလို့ ပြောရမဲ့ ဓမ္မသီချင်းက Lead Kindly Light ဖြစ်ပါတယ်။ ပျိုးလာတဲ့ အမှောင်အတွင်းမှာ အကြင်နာမီးရောင်လေးက လမ်းပြပေးပါ။ ဟိုးအဝေးကိုမြင်ရဖို့ မတောင်းဆိုပါဘူး။ ခြေတစ်လှမ်းချင်းကိုသာ လုံခြုံမှုပေးရင် တော်ပါပြီ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယဆောင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်မတို့လည်း နှစ်သစ်မှာ ခြေတစ်လှမ်းချင်း မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ မျှော်မှန်းပါတယ်။
New year revellers begin welcoming 2013
Hundreds of thousands gathered around Sydney harbour to watch the city’s famous firework display.
Celebrations will also be held for the first time in Burma,
where large public gatherings were banned by its previous military rulers.
မူးရူးရမ်းကားပြီး ပြသနာတွေ နဲ့ ကြိုဆိုတဲ့ည မဖြစ်စေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီစကား ကို ဖတ်ပြီးတိုင်း အရမ်းသဘောကျလို့ သဂျီးက တင်ပေးတော့ ထောက်ခံအားပေးခဲ့တယ်။
မလတ်က တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတော့ ဒီအပတ် ဒီလှိုင်းစာစောင် ရလာတော့ သတိရပြီး တင်ပေးဖို့ စာရိုက်တဲ့အခါ သူ့စာအထားအသို အဖြတ်အတောက်အတိုင်း ဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး စာကို သေသေချာချာ ဖတ်မိသွားတော့ စာရဲ့အရသာကို ပိုသိသွားရတယ်။
(အများအကျိုးဆောင် ကိုယ့်အကျိုးအောင်) :hee:
စာကို ကူးရိုက်ရင်းနဲ့မှ သတိထားမိတာက….
ဒါပေမယ့် လို့ ရေးတာကို အမှန်ထင်ထားတာ ဒါပေမဲ့ လို့ ရေးထားတာတွေ့တော့ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတယ်။
နောက်ပြီး ချက်ခြင်း လို့ ရေးရမယ်လို့ ထင်ထားတာ် ဒီစာထဲမှာ ချက်ချင်း လို့ ရေးထားတာတွေ့လို့ ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆိုတာ သိတဲ့သူများ ကူကြပါအုံး။ :eee:
စာစောင်မှာပါတာကို ဘာများပိုတတ်လို့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေလဲလို့ မေးရင်တော့…….
ဒီလှိုင်းစာစောင်မှာပဲ စေတသိက် စေတသိတ် လို့ (ထင်တယ်) မှားထားတာ တွေ့ဖူးတော့ ပုံနှိပ်စာတွေလည်း မှားတတ်တာမို့ သေချာချင်လို့။